Taliska Dhexe Ee Ciiddanka Maraykanka Ee Ka Hawlgala Somalia Oo Loo Soo Wareejiyey Muqdisho – Hornafrik Media Network
Taliska Dhexe Ee Ciiddanka Maraykanka Ee Ka Hawlgala Somalia Oo Loo Soo Wareejiyey Muqdisho
By HornAfrik	 On Nov 20, 2017
Tirada Ciiddanka Maraykanka ee ku sugan Somalia ayaa la sheegay in aad loo kordhiyey sannadkan, lana gaarsiiyey in ka badan 500 oo Askari.
Waaxda Gaashaandhiga Maraykanka ee The Pentagon ayaa sheegtay in boqolaal Askar dheeraad ah u soo daabuleen Somalia, kuwaasi oo Ciiddanka Deegaanka Talooyin ka siinaya Dagaalka lagu jiro Alshabaab iyo Daacish-ta ku sugan Puntland.
Afhayeenadda Taliska Milliteriga Maraykanka ka jooga Qaaradda Afrika (AFRICOM), ROBYAN MARK oo la hadashay Wargeyska POLITICO ee ka soo baxa dalka Maraykanka waxay sheegtay in la kordhiyey Ciiddanka Maraykanka ka jooga Somalia, iyadoo sheegtay inay horey u ahaayeen 200 Askari, balse sannadkan lana gaarsiiyey in ka badan 500 Askari.
Waxay intaasi ku dartay in muhiimadda Ciiddankaasi tahay La-talin iyo inay taakulenyn siiyaan Hawlgalka AMISOM.
Dhinaca kale, Wargeyska POLITICO waxa uu qoray in Xarunta Dhexe ee Ciiddanka Khaaska Maraykanka ee SEALS ee ka hawlgala Somalia laga soo wareejiyey dalka Jarmalka, isla markaana haatan si toos ah looga maamulo magaalladda Muqdisho.
Wargeyska waxa kale oo uu qoray in ay Waaxda Difaaca Maraykanka markii ugu horreysay Jeneral u soo direen Somalia, kaasi oo lagu magacaabo Sarreeye Guuto MIGUEL CASTELLANOS.
Sarkaalkan ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa Saraakiishii Maraykanka ee sannadihii 1990-aadkii Hawlgalka Nabad-ilaalinta u joogay Somalia.
Jenaralkaas waxa uu haatan madax ka yahay Ciiddanka Maraykanka ee ka hawlgala Soomaaliya ee loo yaqaano Isku-xirka Hawlgalka ee Mogadishu Coordination Cell.
Akhriso:-Qodobada Looga Hadli Doono Kulanka Baarlamaanka Soomaaliya